कति छन् नेपालमा आइसाेलेशनमा बिरामी ? – Lokpati.com
नेपाल प्रहरी सरकार राशिफल नेकपा प्रचण्ड पक्राउ मृत्यु चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस केपी शर्मा ओली अपराध प्रधानमन्त्री अमेरिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं, २२ चैत। कोरोना संक्रमणको आशंकामा नेपालमा अहिलेसम्म ६९ जना आइसोलेसनमा भर्ना भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौंमा १५ जना काठमाडौं बाहिर ५४ जना गरी देशभर गरी ६९ जनालाई आइसोलेशनमा भर्ना गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा हालसम्म १४ सय ४१ जनाको कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को आशंकामा नमूना परिक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जनाकारी दिएका हुन्।
प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार काठमाडौं बाहिर ६ स्थान जनकपुर, धरान, हेटौटा, पोखरा र सुर्खेतमा पनि कोरोना परीक्षण नमूना जारी छ। भोलीबाट चितवनको भरतपुर र बुटवलबाट समेत नमूना परिक्षण हुने प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिए। प्रवक्ता डा. देवकोटाले ३४ सय ६२ कल आएकोमा ११ सय ३३ कलको सम्बोधन भएको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको अति उच्च जोखिम अथार्त ‘रेड जोन’मा १ सय २६ जनामा रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले नयाँ वेबसाइड तथा मोवाइल एपबाट गरिएको ‘सर्वेक्षण’का क्रममा १ सय २६ जना रेड जोनमा रहेको बताए।
देवकोटाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएका १ सय २६ जनाको खोजी गइरहेको छ। उनीहरुको खोजी पछि सबैको नमूना परीक्षणका लागि स्वाव संकलन गरिने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिन अगाडि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को लक्षण पहिचान गर्ने एउटा छुट्टै वेवसाइट र मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएको थियो। हालसम्म ६ हजार ५ सय २७ जनाले वेवसाइट र मोबाइल एप ‘प्रयोग’ गरी आफूहरुमा देखिएको लक्षण उल्लेख गरेका छन्। जसमध्येका १ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमणको सबै लक्षण मिल्न गएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए।